I-china Holdwin Pneumatic Sandblast Cabinet Deadman Double Sandblaster Gun Sandblasting Tank Surface Yokuhlanza Umshini 150L-3000L ifektri kanye nabaphakeli | Ukuhlanza okusheshayo
Izitolo Zokwakha, Indawo Yokukhiqiza, Izitolo Zokulungisa Imishini, amapulazi, Imisebenzi yokwakha
Umshini Wokuhlanza Ubuso
3.2m3 / iminithi (1 Isibhamu)
Ubuningi (Amasethi) 1 - 10 > 10
Isimiso sokusebenza somshini ovulekile wokuqhumisa:
Umshini usebenzisa inqubo yokuphakela uhlobo lokucindezela (ukuqhumisa), okungukuthi, ukugeleza okuphezulu kwengcindezi yomoya ocindezelweyo ethangini elinengcindezi enkulu kuyenziwa, kuthi isihlabathi esisethangini lokucindezela kakhulu sifuthwe ngepayipi lesihlabathi , bese kuthi umbhobho ucindezelwe ukuhamba komoya. Ukujova ngesivinini esikhulu ebusweni bendawo yokusebenza ukuze kususwe ishlabathi.
Kwethulwe ngobuchwepheshe obuphambili baseJalimane.
Yamukela iqonde-ngokusebenzisa uhlobo ukuqhumisa valve, okuyinto ukuzixazulula ngokuphelele clogging we olwalwenza. Ijubane lesitolo esingaqhuma lingafinyelela ku-200M / S.
I-Metallic Grit Isisindo (kg)
Isikhathi ukuqhumisa (iminithi)
Vula ukuqhuma komshini womshini:
Isetshenziselwa ukuhlanza izakhiwo zensimbi, isikhunta, nemishini yokufaneleka. Ingilazi, ukuqoshwa kwamatshe, ukwakhiwa kwemikhumbi, amabhuloho, izimayini, imishini, amapayipi kawoyela, amaphrojekthi wokonga amanzi, ukwakhiwa kwetheku, njll. Ukuqothuka, ukucutshungulwa kwesifutho, ukwehla, ama-burrs kungasetshenziselwa ukufafaza, izinqubo zokwelashwa zangaphambi kokufakwa Ukunamathela kobuso besendlalelo konke kuphathwa ngaphezulu. Isetshenziselwa ukufafaza amaphilisi engilazi nokuqinisa ubuso bezingxenye ezipholishiwe.
Ubuhle bomshini ovulekile wokuqhuma isihlabathi:
Ingathatha indawo yenqubo yokukhetha i-pickling phosphating futhi ayikho inkinga yamashaji endle. Ukususwa kwesihlabathi okusheshayo nokugqwala, ngenkathi kuguqula ubukhulu bendawo, nakho kungasusa i-slag yokushisela, i-burrs, i-flash. Ukusebenza kahle okuphezulu, izindleko eziphansi kanye nekhwalithi enhle akunakuqhathaniswa nekhemistri yendabuko nokwehla okwenziwa ngesandla. Ngemuva kokuqhumisa, ikhwalithi yepende yinhle futhi impilo yokumboza yinde. Kuyinqubo ejwayelekile eyamukelwa emhlabeni jikelele.
I-valve yesihlabathi iyingxenye ebalulekile yomshini wokuqhuma kwesihlabathi. Umsebenzi wawo omkhulu ukulawula ukuvulwa nokuvalwa kwento yesihlabathi nokulungiswa okungenamikhondo kwesilinganiso sokugeleza kwesihlabathi ngesikhathi kuqhuma isihlabathi. Ikhwalithi ye-valve yesihlabathi ithinta ngqo ukuthi umshini wokuqhumisa isihlabathi ungasebenza ngokujwayelekile.
Lolu hlobo lomshini wokuqhuma isihlabathi usebenzisa i-valve enkulu yesihlabathi ekhiqizwa inkampani yethu. I-valve isebenzisa ubuchwepheshe benkampani yase-American SCHMIDT, enezici zekhwalithi ethembekile, ukulungiswa okulula nokunakekelwa okulula. Kuyisakhiwo esisetshenziswa kabanzi emazweni emhlabeni wonke; ukuvulwa kwe-valve yesihlabathi kulawulwa umfutho womoya, futhi inqubo yokwenza ukuthi lapho itheku lokulawula linophawu lwomoya, i-piston ye-valve yesihlabathi iqhuba isiqu se-valve sikhuphuke, i-valve yesihlabathi ivuleke, bese ukulungiswa kuyalungiswa . Ukuma kwekepisi kungalungisa inani lokuvula le-valve yesihlabathi, ngaleyo ndlela kulawulwe izinga lokugeleza kwento yesihlabathi, futhi nenani lokuvula le-valve yesihlabathi lingalungiswa ngaphandle kwesinyathelo. Isiqu se-valve nomkhono we-valve oxhumana nezinto zesihlabathi ku-valve yesihlabathi wenziwe nge-carbide yegolide eqinile. Kwandisa impilo yenkonzo ye-valve yesihlabathi.
ithusi elomile isihlabathi ukuqhumisa umshini HST9080A
aluminium amasondo isihlabathi blasting umshini
I-Electrostatic spray gun powder enamathela
Umshini we-Holdwin ongenaluthuli ongenamanzi
ukuqhuma kwesihlabathi sepulasitiki